Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neentlanzi ze-tiger eziyoyikekayo nezinoburhalarhume | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kudibana nentlanzi enkulu kakhulu kwaye yomelele ephila ngokuhambelana negama layo. Malunga nayo Intlanzi yehlosi. Igama layo lenzululwazi ngu IHydrocynus vittatus kwaye yeyosapho lakwa-Alestiidae. Ikwaziwa kananjalo ngegama lentlanzi kaGoliyathi, njengoko isikhumbuza umfanekiso kaGoliyati, enobukhulu obukhulu kunye nembonakalo eyomeleleyo. Yeyona ntlanzi imangalisayo neyoyikisayo kwiAfrika yonke. Abantu abaninzi bamfanisa ne-monster, kuba ukubonakala kwayo kunye nobukhulu bayo buqhelekile.
Yenza umngxunya kwishedyuli yakho exakekileyo yokufunda eli nqaku, kuba ndiyakuqinisekisa ukuba iyakufaneleka. Fumanisa zonke iimfihlelo zentlanzi engwe kunye nendlela yayo yobomi.
2 Inkcazo eneenkcukacha
3 Ukuziphatha kunye nendawo yokuhlala yentlanzi yehlosi
4 Ukutya kweentlanzi kunye nokuzala kwakhona
Le ntlanzi inobundlobongela kwaye inobuchule. Ihlala iphaphile kwaye iyazi ukuba ikwazi ukuhlasela ixhoba elithile. Ngenxa yobukhulu bayo obukhulu kunye nembonakalo eyoyikekayo, le ntlanzi ihlonitshwa ngabo bonke abayibonayo. Ukususela kumaxesha amandulo, abantu babecinga ukuba le ntlanzi inento yokwenza noGoliyati wokwenene kunye namabali angenakubalwa abikiweyo ngaye.
Akukho mahluko mkhulu phakathi kwamadoda nabasetyhini, kuba zombini zikhangeleka zoyikisa. Amadoda anokuba mfutshane kancinci kunabafazi xa sele ekhulile, kodwa ayinamsebenzi kwaphela. Ngaphambi kokuba babe ngabantu abadala, babezintlanzi ezincinci nangona benembonakalo eyingozi. Mhlawumbi yile nto eyenze ukuba iphile kakuhle kuyo yonke indaleko yayo. Ukuba nomlomo omkhulu kangaka namazinyo abukhali, ezinye iintlanzi zoyika nje bakukubona.
Kwenzeka into efanayo kubomi bokwenene. Mhlawumbi kukho umntu onembonakalo enobungozi kwaye ulungile kwaye unobungane. Ubunzima xa befikelela ekuvuthweni kuhlala kujikeleze i-28 kilos, nangona iintlobo zeentlanzi ezingwevu ezinobunzima obungaphezulu kwe-68 kilos zifunyenwe. Baye babonwa kumanzi akhawulezayo oMlambo iZambezi.
Yintlanzi yasemanzini Inzalelwane kumazantsi oMlambo iCongo, uLualaba River kunye namachibi i-Upemba kunye neTanganyika. Zezinye zeentlanzi ezoyikekayo ezifumaneka kwimilambo yaseAfrika. Ngokwesiqhelo, ziingwenya ezinetrone ngenxa yoloyiko lokuba abanye baziva ngathi. Abantu abaninzi eCongo baqinisekisa ukuba ezi zilwanyana azizoyiki iingwenya. Ngapha koko, bathi ezi ntlanzi zimangalisayo zityisa iingwenya ezincinci ngelixa zisakhula.
Nangona le ntlanzi ibonakala iyingozi, ayihlaseli bantu. Iyafana nepiranha enemihlathi ephuhliswe kakhulu kunye nomzimba onezihlunu ezomeleleyo. Emlonyeni inamazinyo abukhali angama-32 ngayo ikrazula ixhoba.
Ndiyabulela Ingxowa yomoya abanayo ngaphakathi inokubamba ukungcangcazela kunye namaza yeentshukumo ezenziwa ziintlanzi eseleyo ukuze zazi indawo ezikuyo. Nje ukuba ibabone, bayahamba ukuze babanjwe ngokungalindelekanga.
Umzimba wabo uhlala umalunga neemitha ezimbini ubude kwaye unobunzima obujikeleze i-28 kilos. Umzimba womelele kwaye umbala wawo yisilivere nengwevu.
Ukuziphatha kunye nendawo yokuhlala yentlanzi yehlosi
Iintlanzi ze-Goliath zikhawuleza kakhulu xa kufikwa ekubambeni amaxhoba. Ihlala injalo Ukuziphatha okukhohlakeleyo kunye nokubona ngamehlo. Nangona ukubonakala kwayo kunokuba sisinxulumani esibi ukuze kungaziwa, iyakwazi ukuhamba ngononophelo, isenza iintshukumo ezikrelekrele, idade isondele kwixhoba ngaphandle kokubonwa. Yile ndlela, xa iphosa ixhoba, liyazikrazula ngomzuzwana. Kubonwe kutshabalalisa a intlanzi yekati ngobukhulu obukhulu ngokulula.
Kuba uhlala esemanzini ngokukhawuleza, uqeqeshiwe kwaye uyakwazi ukudada ngesantya esikhulu. Thatha ithuba lokuba buthathaka kwezinye iintlanzi kumandla emisinga yomlambo ukuze ubabambe ngaphandle komzamo omkhulu. Akukho nto ingako eyaziwayo malunga nelungelo labo lokuphila endle. Ekuthinjweni, kuye kwafikelela kwiminyaka eli-14 ubudala.
Kuba indawo yayo yokuhlala yendalo inguMlambo iCongo, ongowesibini ubunzulu eMhlabeni, ingwe yentlanzi iye yakwazi ukukhula kakhulu kwaye ilungiselela iimeko ezinjalo. Ndiyabulela kule nto, inamandla amakhulu kwaye ayithandabuzi nakancinci ukuyisebenzisa ukubetha imisinga ekhawulezileyo kunye nokubamba ukutya kwayo.
Inokuhlala ifumaneka kumanzi acocekileyo kunye nemozulu yetropiki kunye nemisinga eyomeleleyo. Iyakwazi ukudada ngokuchaseneyo yangoku kwaye, ngaphandle kokunyanzelwa kwamanzi, yenze ngaphandle komzamo.
Ukutya kweentlanzi kunye nokuzala kwakhona
Le ntlanzi itya iintlanzi zabo bonke ubungakanani kunye nemibala. Batya ngokupheleleyo Kwaye, besebancinci, sele beqala ukondla ii-crustaceans, izinambuzane kunye neplankton. Njengoko besesitshilo ngaphambili, kubonwe amatyeli aliqela zityisa iingwenya ezincinci kunye neentaka ezikwaziyo ukubamba eziya emanzini oMlambo iCongo ukuze zipholile.
Iyakwazi ukuziqhelanisa notshintsho olwenzeka kwindawo yazo yendalo. Ngokubanzi, amanqanaba amanzi oMlambo iCongo awazinzanga. Benyuka benyuka rhoqo. Ngamaxesha athile amatyala ngamanye amaxesha okuhlaselwa kwabantu aye axelwa. Ezi ngxelo zibhengeze umonakalo omkhulu emilenzeni nasezandleni zakhe njengoko umhlathi wakhe womelele kakhulu.
Iyakwazi ukutya ixhoba lezilwanyana ezifileyo ngokungathi yipiranha. Xa iluma ixhoba kwaye isemlonyeni, iyashenxa ize iye kwindawo ethe cwaka ukuze izonwabele.
Ngokumalunga nokuzala kwayo, ixesha apho ukuzala kuqala khona kungqamana nexesha lemvula apho kukho izikhukula. Ihlala ikwinyanga ka-Epreli noMeyi. Basebenzisa eli thuba lamanzi ukuba lizale elunxwemeni, basebenzise indawo enezikhukula.
Xa imazi izalela amaqanda, iyakwazi ukubeka ngaphezulu kwe-800, ngoko bavelisa ngokukhawuleza. Amadoda afikelela ekukhuleni ngokwesondo kwiminyaka emithathu. Asingabo bonke abantu abazalwayo abafikelela kubantu abadala, kuba kulula ukuba lixhoba lezinye izilwanyana.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi uyazi ngakumbi malunga nentlanzi yehlosi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yehlosi